Onion chives - kuyini? Onion chives: ezikhula imbewu, inhlabathi izici kanye nencazelo
Onion chives (kuyini, uzobe kuchazwe esihlokweni) - isiko empeleni esasisesisha, eyabonakala kumasayithi zabantu. Nokho, nesikhathi esifushane kangaka, lesi sitshalo lithole inombolo enkulu abalandeli. Uma ukholelwa ukuthi ukubuyekezwa, lokhu liyinqolobane wangempela amavithamini, upheke kakhulu othanda kuye, njengoba kufanelekile ngisho imikhiqizo obucayi kakhulu.
Ezweni lethu, i-onion chives abizwa ngokuthi ehluke, okungukuthi chayvisom. Ngo uthi eziningi, kuba isitshalo zasendle, isibonelo eYurophu, e-Asia Ephakathi futhi India. Ilokhu Excellent abandayo, obudlange kangaka ogwini North Sea.
Lena isitshalo zisetshenziswa, ukumelana ezibandayo. Lokhu kusho ukuthi ngokuzenza isiqinti onion chives (kuyini, kungatholakala esihlokweni), nokususa imfucumfucu okutshalwe entwasahlobo, maduze bethokozela anyanisi oluhlaza. Futhi endaweni libalele ngesonto emva Udambisa iqhwa.
Nqumani nezithombo pair engcono sikelo, kuyobe sekudingeka ukwenze lokho uthele zwe ukuba amahlumela Akuthathanga sikhathi.
Isici esikhethekile sale isitshalo ukuthi ayinayo isibani ngomqondo lapho thina zijwayele. Nakuba, ngokusho zezitshalo, it has a lot of ama ezincane embozwe ulwelwesi ekhethekile ezinolwebu.
I izakhiwo ezuzisayo chives Akungabazeki. Okokuqala, kukhona oluyingozi, okuyinto kungavimbela ukusabalala ukutheleleka. Okwesibili, singasho ukuthi lolu hlobo esilufifi onion ukunambitheka, ngokungafani isibani. amahlamvu Elimnandi, obuhlanganisa Ukuthamba nangobuciko kuyoba indlela kunoma isidlo, ngisho umkhiqizo ezingezwakali kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, indlela yokwakheka umkhiqizo zihlanganisa lysine, tryptophan, methionine nezinye amino acid ezibalulekile. Futhi lapha omningi vitamin C kanye nosawoti wamaminerali. Kunconywa ukwengeza chives onion ku ukudla labantu abaphethwe izifo yaleli pheshana biliary, izinso nenhliziyo.
Onion chives: ezikhulayo kusuka imbewu
Lesi simila libhekene yokuthi uyazibekezelela ukungabi bikho kokukhanya kwelanga, ukuze ungakwazi kalula ukuthola indiza emthunzini. Kwezinye izimo kuba ngisho ewusizo, ngoba amahlamvu isikhathi eside bahlale bethobekile futhi ningayiqinisi. Ngu kukhethwa enhlabathini onion chives akuzona ngikhetha ngokweqile kakhulu, kodwa noma kuphi ukubeka akudingekile noma. Endaweni ekhethiwe akufanele kube rhizomes nezinye Ezikhula iminyaka eminingi, ikakhulukazi uma ukuthi awuhambi ukushintsha indawo kokufika eminyakeni embalwa ezayo.
Kunezindlela ezimbili zokukhiqiza kabusha zalesi sitshalo yilezi:
Uma ufuna ukuba esizeni onion yakho chives, sikhula kusukela imbewu kuzokuvumela ukuba wenze lokhu. Lokhu kumele kwenziwe ngoMeyi noma Julayi. Omunye kungaba eyayenziwe ukunciphisa isikhathi imbewu ukuhluma emanzini emanzini nje ngaphambi kokutshala. Badinga sibekwe kude komunye nomunye ngu 30 cm noma izikhala kwezinye izingcezu. Abanye bakhetha ngidlulise nobusika ngaphansi ukufika. Uma ukhetha le ndlela yokuzala, bese cwilisa imbewu anyanisi, chives akudingeki. Ngaphezu kwalokho, notch ukulungiselela kusengaphambili kangcono. Ngaphezu kwalokho, kufanele sikhumbule ukuthi uphawu ngaphansi kuka-2 cm ukujula.
Inhlabathi ukulungiselela libuye Kunconywa. Ikakhulukazi, inhlabathi kumele kube zamulchirovat Peat humus, futhi izitshalo ngokwabo kangcono iqhubeka. Khumbula ukuthi izithombo abasha namanje buthaka kakhulu, futhi zidinga ukunakekelwa okukhethekile, ngokukhethekile, kudingeka uvikelwe kubantu frost.
Vegetative ukukhiqizwa kabusha indlela
Onion chives (ezikhula imbewu kufanelekile esimweni endaweni yakho phambi kwakungeyona) futhi zingakhula vegetatively. Ngenxa yalesi ehlathini anyanisi kumele ihlukaniswe izingxenye eziningana, futhi ngayinye kuwo kumele okungenani ibe 8 ama. It watusa etshalwe imigqa at ibanga cm 30 kusuka komunye nomunye. Ungakhohlwa ukudicilela izitshalo emva kokutshala. Kungcono ukuba bafeze ngasekuqaleni kwentwasahlobo noma ebusika.
Okuhle onion kwezitshalo kungaqinisekisa kuphela ukunakekelwa kahle-ke, okubandakanya:
Kuleso simo, uma ibanga phakathi amahlumela esingaphansi 5 cm, kubalulekile ukuba ilingane proryadit.
Ukugqoka desirably eyenziwa ngoJulayi. Ukukhetha okungcono Umanyolo wemvelo noma Izingxube ekhethekile amaminerali. Kungenzeka futhi ukusebenzisa ukwakheka elandelayo slurry engeza phosphorus kanye potassium nosawoti (1: 4). Lokhu soiling nge sibalo 1 kg zikamanyolo 100 m ingxenye. Ngemva ukuvundiswa ezifana lesi sitshalo luyokhula cishe phambi kwamehlo ethu.
Kukhona omakhelwane eqinisekile okuyikhona izaqathe notamatisi, kanye no-anyanisi chives (lokho kuchazwa ngenhla) kuyoba umakhelwane mkhulu ngadi, ngoba uthando lwakhe bee - akakholelwa kakhulu uju isitshalo. It is hhayi Kunconywa ukutshala eduze beet kanye iklabishi.
Lesi simila enezinto eziningi izinhlobo ukuthi uyozizwa omkhulu endaweni sezulu esipholile. Lawa:
Bohemia - endaweni eyodwa anganika amahlamvu elimnandi cishe iminyaka emihlanu, it libhekene ukumelana izifo kanye isivuno high.
A uju - hlobo wesabe isikhutha, iyathela isivuno kakade ngosuku 85th.
Chemal - kudinga isivikelo downy isikhutha, kutuswa ukuba asakaze vegetatively, futhi lesi sitshalo kungcono kakhulu ekuqaleni kuka Meyi.
Elvi - libhekene izimbali ezimhlophe, okwenza kube eyingqayizivele ngempela.
Enye inzuzo undoubted zalesi sitshalo iyona ongakwenza ukukhulisa ikhowe le-ke unyaka wonke endlini noma efulethini. Onion chives efasiteleni ngeke kuphela kube isinongo kakhulu for izitsha ebusika, kodwa futhi umhlobiso futhi umthombo oxygen. Kodwa khumbula ukuthi amakhambi ayikwazi pinching, kubalulekile kuphela ukusika, noma ehlathini ozithandayo iqala ukulimaza.
Ungayisebenzisa iresiphi efanayo anyanisi evamile. Dish bazuze kuphela ukusuka kulo. Futhi, amakhambi kungaba kuvuna ebusika, uma ungenawo uhlela ikhule efasiteleni. izakhiwo awusizo ayagcinwa uma chives onion (kuyini, bheka isihloko esithi) omisiwe, usawoti noma obuningi. Futhi, kungenziwa futhi njengengxenye nezinye amakhambi. Izame futhi uyokufa athande lolu hlobo umnsalo.
Terracing isayithi ngezandla zakhe: izici, imibono ezithakazelisayo kanye nezincomo
Black currant Gross: incazelo ezihlukahlukene kanye nezici kulinywe
Narcissus. Ukutshala nokunakekela. Tulips
Yini iphupho ukuthi anqunywe ikhanda? Kungani dream of a ikhanda elinqunywe lomuntu, inja, ikati, ingulube, Iqhude?
UMikasa Ackerman - isikhali esinamandla ngokumelene neTitans
Amalotha Antonov - umdlali omusha e CSKA basketball biography nokufeza
Cognac "Martell" VSOP, VS, XO: ukubuyekezwa. Indlela ukuhlukanisa mbumbulu?
Hypoplasia kwesibeletho 1 degree: Izimbangela, Izimpawu, Sifo Nokuselapha